Ọ kwesịrị azụmahịa gị na Twitter? | Martech Zone
Ọ kwesịrị azụmahịa gị na Twitter?
Na nso nso, Twitter kpughere na Apple si uko iOS mwekota nke Twitter nwere kwalitere ntinye aka twitter site na 25%. Mgbe m gbachara ya afọ ole na ole, emesịrị m daa ma weta iPhone… Aga m ede banyere ya ma emechaa. Enwere m mmasị na njikọta siri ike na iPhone na Twitter - Echere m na m na-ahụkarị Twitter n'anya ọzọ!
Ihe karịrị nde mmadụ 100 abanyela na Twitter kemgbe 2006, na -ekọrịta akụkọ, nghọta, na foto pusi. Mana Twitter ọ bụ maka gị n'ezie?
Ederede a dị na FlowTown na Kọlụm Ise ma azụmahịa gị ọ ga-adị na Twitter dị egwu!
Ya mere… azịza ya bụ EE! Ikwesiri idi na Twitter.
Tags: azụmahịa twitterị kwesịrị ịnọ na twitterọ kwesịrị azụmahịa gị na twittertwitter maka azụmahịagịnị mere ị ga-eji nọrọ na twitter
Dee 19, 2011 na 11: 57 AM
Ọ bụ ihe infographic na-atọ ụtọ, mana egbutula ya ma kpọọ nkụ. Enwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ ị ga-atụle mgbe ị na-ekpebi ma azụmahịa gị kwesịrị ịnwe ọnụnọ Twitter.